Ninkani wuxuu ka jawaabayaa dadka isaga weydiiya haddii uu ka tegayo xaaskiisa oo ay dabka ku dhufteen - DARYEELKA CAAFIMAADKA MAGAALADA - TELESHO
ACCUEIL » QODOBO Ninkani wuu ka jawaabayaa dadka weydiinaya haddii uu ka tagi lahaa xaaskiisa oo ay dabka ku dhufteen - SANTE PLUS MAG
Welcome / Psycho & Galmada / Jacayl iyo Lamaane /
Ninkani wuxuu ka jawaabayaa dadka isaga weydiinaya haddii uu ka tagi lahaa xaaskiisa ay dabka ka dhigeen
Waqtigeennaba, dad badan iyo dad badanba waxay dareenka muuqaalkaba ka muuqdaan muuqaalka jirka marka loo fiiriyo qofka kale. Laakiin waa ku filan in jacaylku dego inta u dhaxaysa laba qof si jidhku u lumiyo muhiimada ay leedahay. Akhriso sheekada guuritaanka ee haweeneydan oo ay maqaarku dabka ku daadinayaan iyo falcelinta ninkeeda, waxay muujinaysaa macnaha dhabta ah ee jacaylka.
Intee in le'eg ayaa la jebiyey wadnaha sababtoo ah cillad jidheed? Immisa lamaane ah baa burburay sababtoo ah miisaan kordhay? Nasiib daro dadku waxay noqdaan kuwo isdaba-joog ah oo ay ku noqdaan muuqaal muuqaal ah. Laakiin tani maahan kiiska qof walba. Sheekada lamaanahan dhalinyarada ah ayaa cadeynaya!
Shil uu ku dhaco cawaaqib xun
Turia Pitt waa haweeney dhalinyaro ah oo Australiyaan ah, cayaaraha iyo qaabka. In September 2011, ayay ka qayb-galay marathon weyn ee magaalada Australian of Kimberley, markii si lama filaan ah ayay heleen nafteeda xanniban dab baadiyaha ah, kuwaas oo olol gubay 64% jidhkiisa.
"Ka hor inta aanad bilaabin maaradoonka, waxaan dhagaha dhagaha dhegahayga dhegeysta, waxaan jeclaa dhageysiga muusikada. Waxaan ku jiray caafimaad wanaagsan, waanan ordi lahaa oo waxaan fiirin doonaa geedaha iyo cagaarka. Waxaan durbadiiba xakumay 25, markii aan arkay dabka soo socda ee jihada aan ku jiray, ma aanan argagaxin sababtoo ah waxaan horay uga shaqeyn jiray adeegga caafimaadka, waxaanan u isticmaali jirey nooca noocan ah dabka. Laakiin markan dab wuxuu ahaa mid careysan, cabsi iyo awood badan. "
Afar saacadood kadib dabku wuxuu gubay jidhkeeda oo dhan, Turia ayaa ugu dambeyntii loo qaaday isbitaalka. Waxay ku jirtay xaalad halis ah, dhakhtarradu waxay go'aansadeen inay ku ridaan a kooma Caadi ah oo soconayey bishii sababtoo ah fursadaha uu ku noolaan karo waa mid aad u hooseeya.
Marka Turia ka soo kacday miyirkeeda. Waxay dareemeysay in wax isbeddelay, maqaarkeedii ayaa lumisay dhamaan jilitaankeedii, dhaqdhaqaaqii ugu yaraa ayeey adagtahay. Turia waxay noqotey xabsi ku jirta jirkeeda.
Waxay aragtay waalidkeed iyo ninkeeda Michael horteeda, laakiin way kula hadli wayday tuubo lagu beeray cunneheeda. Ereyada jacaylka iyo dhiirrigelinta waxay ka caawisay inay dareentid ka wanaagsan, laakiin ma fahmin waxa dhacay.
Si tartiib ah, mahadnaqa Michael, iyo waalidiintiisa, Turia wuxuu bilaabay inuu erayadiisa ugu sheego kaddib shilka. Waxay ugu dambayntii u guurin lahayd buruunlaakiin weli ma aysan helin fursad ay ku eegto wejigeeda wajiga muraayadda, maadaama hooyadeed ay ka hor istaagtay in ay sidaas samayso si looga fogaado in ay naxdin ku tahay.
Maalin maalmaha ka mid, Turia waxay gacanta ku haysatay IPad, markay si lama filaan ah u aragtay in ay aragtay wajigeeda maskaxdeeda. Waxay ahayd naxdin dhab ah iyada, iyada oo qaylinaya qoto dheer, iyo ilmo ayaa noqotey mid aan la xakamayn karin.
Laakiin markii ay ogaatay in muuqaalkeeda cusub uusan bedelin jacaylka Michael iyo isaga waalidiinta isaga oo xiran, waxay dareemay nasiib iyo farxad in la jecel yahay loona qaddariyo qofkeed, oo aan u ahayn jirkeeda. Taasi waa waxa riixay in ay rabto in la hagaajiyo maalin kasta, iyo in ay noqdaan qof cusub oo buuxa xamaasad iyo hami.
Jacayl nacas ah
Dhowr bilood ka dib shilka, Michael ayaa shaqada ka tagay si uu u daryeelo Turia. Tan iyo 2011, wuxuu sii wadi doonaa inuu daryeelo, si uu uga caawiyo hawlaha maalin kasta, iyo inuu u keeno dhamaan jacaylka iyo jacaylka ay u baahan tahay in laga gudbo dhibaatooyinka.
Marka dadku rabaan inay ogaadaan sababta uu Michael uusan u maleynaynin inuu ka tagayo jacaylkiisa noloshiisa, jawaabtiisu waxay ahayd gaar ahaan taabasho iyo dhaqaaq:
"Waxaan soo jiitay nafteeda, iyo shakhsiyadeeda, Turia waa haweenka kaliya ee sii wadi doona in ay ogaadaan riyooyinkayga"
Maanta, Turia iyo Michael waa isqabaan, waxayna ku wada nool yihiin farxad buuxda. Gubashada Turia kuma aysan joojin inay nolosheeda ku noolaato sida ay u rajeyneysay, iyo inay fuliso riyadeeda oo dhan. Intaa waxaa dheer, labada lamaane waxay leeyihiin wiil yar oo magaciisa la yiraahdo Hakavai, kuwaas oo noloshooda nolol maalmeedkooda ku sifooba, waxayna siineysaa dhoola-cadeyn xitaa xilliyada ugu adag.
Sheekada guuritaanka ee Turia waxay kicisay kumanaan qof oo adduunka ah. Gabadha ayaa hadda taageertay dhowr urur oo kudhibaya dhibbanayaasha adduunka. Iyo tan iyo 2011, waxay sii wadaa inay sheegto in ay tahay jacaylka waalidkeed iyo Michael oo ka caawiyay in ay sii noolaato.